Smart Imba - Pandawill Technology Co, Ltd
Imba otomatiki ndiko kuwedzera kwekugara kwekuvaka otomatiki. Zviri otomatiki epamba, epamba kana epamba chiitiko. Imba otomatiki inogona kusanganisira kutonga kwepakati kwechiedza, HVAC (kudziyisa, kufefetedza uye kutonhodza mweya), zvishandiso, makiyi ekuchengetedza masuo nemikova uye mamwe masisitimu, ekupa nyore kuvandudza, kunyaradza, kugona kwesimba uye chengetedzo. Imba otomatiki yevakwegura nevakaremara inogona kupa hwakawedzera hupenyu hwevanhu kune vangangoda vachengeti kana kuchengetwa kwenzvimbo.
Kuzivikanwa kwemota otomatiki kwave kuri kuwedzera zvakanyanya mumakore achangopfuura nekuda kwekukwanisika kwakanyanya uye kupfava kuburikidza ne smartphone uye piritsi yekubatanidza. Pfungwa ye "Internet yezvinhu" yakasungirirwa padhuze neyakajairika imba yekushandisa.
Imba otomatiki sisitimu inobatanidza michina yemagetsi mumba nemumwe. Matekiniki anoshandiswa kumba otomatiki anosanganisira iwo ekuvaka otomatiki pamwe nekutonga zviitiko zvemumba, senge masystem ekuvaraidza epamba, kudyara imba uye kudiridza yadhi, kudyisa zvipfuwo, kushandura ambiance "zviono" zvezviitiko zvakasiyana (sekudya kwemanheru kana mapato) , uye kushandiswa kwemarobhoti epamba. Midziyo inogona kusunganidzwa kuburikidza netiweki yemumba kubvumidza kutonga nekombuta yega, uye inogona kubvumidza kure kuwana kubva paInternet. Kuburikidza nekubatanidzwa kwetekinoroji yeruzivo nemamiriro epamba, masisitimu nemidziyo inokwanisa kutaurirana nenzira yakabatana inoguma nyore, simba rekushandisa, uye mabhenefiti ekuchengetedza.